मेडिकल जाँच र औषधिमा किन छुट पाइदैन? :: Setopati
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडाैं, मंसिर ६
प्रायः द‌ैनिक उपभोग्य सामानहरु आफै खरिद गर्ने गरेको छु। मौसमअनुसारको लत्ताकपडा आफू र आफ्नो परिवारलाई पनि किन्ने गरेको छु।नुन देखि सुन तरकारी देखि चामल सबै आफैले किन्ने गरेको छु।त्यो लगायत विलासी बस्तुहरु जस्तै घडी मोबाइल ल्यापटप,ईयरफोन, टिभी, क्यामेरा लगायत अन्य धेरै वस्तुहरु।
नुन देखि सुन पसलसम्म जादाँ कही न कही पसले÷साहुजीले बोलेको भन्दा केहि रकम छुट मागेको हुन्छु र पाउँछु पनि ।
रासनपानीकै कुरा गर्ने हो भने पनि आलुकाउली, प्याज,भेन्डी,लसुन,गोलभेडा सबैमा साहुजीले तोकेको रेट भन्दा केहि रकम छुट माग्छु पाएको छु।यसमा दुई मत छैन।
विलासी बस्तु धेरै पैसा पर्नेको पनि छुट पाईन्छ जस्तै बाईक किन्ने कुराको उदाहरण लिन सकिन्छ। अन्य ईलेक्ट्रोनिक्स सामान हरुमा छुट पाईन्छ।
यि सबै बस्तुका एक एक छुट पाएको उदाहरण पेस गरेको छु अब सबै पेस गरिरहँदा सबैलाई सामान्य लागेको हुन सक्छ । सामान्य रुपमा लिने छुट पनि छ।तर मनमा लागेको एउटा प्रश्न छ यो तपाईलाई फेरि सान्दर्भिक असान्दर्भिक दुबै लाग्न सक्छ त्यो सुविधा पनि छ ।प्रश्न सुने पछि यहि प्रश्न तपाईको पनि हुन सक्छ
वा उत्तर तपाई सँग हुन सक्छ ।
अब चकित नपर्नुस् एउटा प्रश्न गरे नुन देखि सुन,हिरा देखि अन्य धेरै महङ्गा गहना लगायत रासन भुटुनदेखि जिवनमा प्रयोग हुने धेरै चिज घर जग्गामा समेत छुट पाईन्छ। तर मेडिकल लाईन र औषधि पसलमा किन तोकेको रेट भन्दा एक रुपैयाँ पनि छुट पाईदैन किन यो सिण्डिकेट हो कि के हो? यसो सम्बन्धित निकायले यसको अनुगमन गर्ने हो कि ध्यानाकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु।
(किनमेल अनुभव तपाइसँग पनि छन् भने हामीलाइ setopati@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुन्छ)
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ५, २०७५, २३:५१:००
छाता किन्दा ठगिएँ